United States Kero Kuvanhu veTanzania pa COVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tanzania Breaking News » United States Kero Kuvanhu veTanzania pa COVID-19
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • chengetedzo • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Tanzania yakakurudzirwa neUS kuti iongorore humbowo pane COVID-19 kupfura.
Nyika dzakabatana dzakurudzira Tanzania neChishanu kuti iongorore humbowo hwemishonga iyi, ichiti inoshanda uye ndeimwe yemidziyo yekurwisa denda reCOVID-19.
Hurumende yeTanzania yakangoita gadziriso shoma mukuramba COVID-19 uye ichibvumira vagari vayo kuzvidzivirira pachavo nekuzvidira.
Tanzania yakanga yadzivirira vanachiremba munyika kuti varape Coronavirus uye vakaramba chirwere ichi.
United States yakasimuka ikatendera mumiriri wayo muDar Es Salaam kutaura neVanhu veTanzania neChishanu,
Chirevo chemumiriri weUS Donald Donald (Kukadzi 26,2021)
Ndiri Don Wright, Mumiriri weUS kuTanzania. Ini ndoda kutaura newe nezve COVID-19, uye nemabatiro atingaite pamwe chete kudzivirira kupararira kwayo uye kubatsira isu tese kugara takachengeteka.
Kubva kutanga kwechirwere cheCovid-19, vangangoita mamirioni maviri nehafu vanhu vakafa nechirwere ichi. Kurasikirwa kunoshamisa, uye hapana nyika isina kumbobatwa. Munyika yangu, United States of America, takarasikirwa nevanhu vanopfuura zviuru mazana mashanu. Kuenderera mberi nekuomesesa zvinhu, misiyano mitsva yehutachiona yakonzera kumwe kuwedzera kwakanyanya kwehutachiona pasirese, kusanganisira kondinendi yeAfrica. Zvave pachena kuti hutachiona hwakasiyana hwasvika muTanzania, zvakare. Ini ndakakurudzirwa nezvakataurwa nezvazvino kubva kubazi rezvehutano kubvuma COVID-500,000 seyakakosha yehutano muTanzania nekukurudzira vagari kutora matanho ekutanga: sekudzivirira mhomho, kupfeka masiki, uye kure kure kwenzanga. Iri izano rakanaka uye ndinokurudzira munhu wese kuti aritevere.
Pamusoro pekushandisa matanho ekuzvidzivirira ekudzivirira kupararira kwe COVID-19, kune mamwe maturusi maviri akakosha akakosha kudzora denda iri.
Kutanga, kuitira kuti uzive kana matanho ekupindura ari kuita zvinangwa, zvakakosha kuti utore uye umhan'are ruzivo nezve kuyedza uye nyaya Ndosaka zvichikosha kuti hurumende dzese dzigovane ruzivo rwakakwana uye nenguva nezve huwandu hwezviitiko zviri munyika dzazvo kuWorld Health Organisation. Kugovera ruzivo urwu kunovimbisa vagari kuti hurumende dzavo dziri kurwira kuchengetedza hutano hwavo nehupenyu hwavo. Zvakare, kumhan'ara kwakadai kunotendera vatsvagiri nemasayendisiti kuti vaone zviri nani chirwere ichi uye kudzivirira kufa kusiri madikanwa - zvese munyika uye mudunhu.
Chechipiri chishandiso majekiseni ekudzivirira chirwere. Sokutaura kwakaita Munyori wedu weNyika, Tony Blinken, "Kusvikira munhu wese pasi pano abayiwa nhomba, hapana munhu anonyatso chengeteka." Mishonga yekudzivirira zvirwere yakabatsira kupedza zvimwe zvezvirwere zvakaipisisa pasi pano, uye hapana mubvunzo kuti mushandirapamwe wekudzivirira vanhu vakawanda uchaponesa vanhu. Ingotarisa iwo manhamba muUS; mumavhiki mashoma apfuura, semamiriyoni ejekiseni akapihwa, huwandu hwezviitiko zvitsva zveCovid-19, zvipatara, uye kufa zvakatanga kudonha. Ndinokurudzira Hurumende yeTanzania kuti iunganidze nyanzvi dzayo dzehutano uye kuongorora humbowo pamishonga yekudzivirira.
Senyika huru inopa hutano uye rubatsiro, United States iri kuramba ichitungamira mhinduro yepasirese padenda reCovid-19, ichipa mari inodarika mabhiriyoni mashanu emadhora kumabasa ekuderedza eCOVID-1.5 pasi rese uye ichivimbisa madhora mabhiriyoni mana kuti ikurumidze kugoverwa kwemajekiseni. Muno muTanzania, takatsaurira $ 19 miriyoni kudzikisa denda reCCVID-4 kubvira pakawanikwa nyaya yekutanga yakasimbiswa munaKurume wa16.4. United States yakamira yakagadzirira kuwedzera kuyedza kwedu uye takazvipira kushanda pamwe neTanzania kuti tikunde Covid19.
Ini ndichavhara meseji iyi pane yangu yega chinyorwa. Ndiri chiremba nebasa. Ndisati ndanzi Ambassador kuTanzania, ndakapedza makore anodarika makumi matatu ndichishanda mubazi rezvehutano. Ini ndinogona kukuvimbisa iwe kuti hutano hweveruzhinji matanho andanga ndichitaura nezve BASA. Ivo vachaponesa hupenyu kana vakagamuchirwa. Ndinokurudzira vese vekuTanzania kuti vabatane izvozvi mukutsigira matanho aya kuitira kuti tikwanise kudzivirirwa pamwe nevatinoda.